Fanaparitahana tsaho tamin’ny lalan’ny tambajotran-tserasera no nahatonga io fiahiana be loatra io. Tovolahy iray manananika ny 42 taona no voasambotry ny mpitandro filaminana teny Mananjary/Soanierana ny 15 aogositra teo. Nambaran’ity tovolahy ity tao anaty tambazotram-piarahamonina fa misy fiangonana vaovao taty aoriana mikonokonona io lazaina fa fanakorontanana io amin’ny fahatongavan’ny Ray masina. Niseho ho olon-kendry izy io ka nitaona ny olom-pirenena Malagasy mba handray andraikitra izy manoloana io fiangonana io. Kinanjo izy no voatery nandraisan’ny mpitandro filaminana andraikitra izay misahana ny sampana ao amin’ny “cybercriminalité” noho ny lainga izay nafafiny ka nanimba ny saim-bahoaka sy ny fiaraha-monina. Ny fikarohan’ireo mpitandro filaminana ny mahakasika ny kaonty “Vorondolo” ao amin’ny FB na facebook izay namoaka sy nanapariaka ny vaovao tsy marina no nahasamborana azy io. Efa natolotra ny fampanoavana ity tovolahy ity.